တရုတ် OEM ODM အသိအမှတ်ပြု Organic Spirulina တက်ဘလက်များ 500mg 1000mg စသည်တို့ကိုထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | ဘုရင် Dnarmsa
၎င်းတွင်အမိုင်နိုအက်ဆစ်များ၊ ဗီတာမင်များ၊ သတ္တုဓာတ်များနှင့်အခြားအာဟာရဓာတ်များစွာပါ ၀ င်သည်။
a အစားအစာတန်း: သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးများအတွက်ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေး၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးအစားအစာ
ခ အစာကျွေးအဆင့် - ငါးမွေးမြူရေးနှင့်မွေးမြူရေးအတွက်သုံးသည်။
ဂ အခြားအရာများ - သဘာဝဆိုးဆေးများ၊ အာဟာရအားဖြည့်ပစ္စည်းများ
၄။ ဆေးဝါးနယ်ပယ် —— ဆေးပြား၊ ဆေးတောင့်နှင့်အမှုန့်
qi နှင့်သွေးအားနည်းရောဂါ၊ သလိပ်ရောင်၊ အဝါရောင်မျက်နှာ၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ ခြေလက်များပင်ပန်းခြင်း၊ အစာစားချင်စိတ်မရှိခြင်း၊ ချို့တဲ့ခြင်း၊ သွေးအားနည်းခြင်းနှင့်အာဟာရချို့တဲ့ခြင်းအတွက်အထက်ပါရောဂါများကိုပိုင်ဆိုင်သည်။
3. Cosmetic အကွက်
တက်ကြွသောပါဝင်ပစ္စည်းများ စပီရူလိုင်းနား ၉၀%
ကိုယ်အလေးချိန်ဖြည့်ပေးခြင်း 250mg, 400mg, 500mg သို့မဟုတ်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်
သက်တမ်း 2-5 နှစ်အကြား
Logo ဒီဇိုင်း ဟုတ်တယ်
Brand Name ပါ မင်းအမှတ်တံဆိပ်ဒါမှမဟုတ်ငါတို့အကြိုက်ဆုံးဆိုရင်
ငွေပေးချေစနစ် T/T, L/C, Western Union, ငွေသား, Ali escrow စသည်တို့
ထုပ်ပိုး Options ကို အစုလိုက်အပြုံလိုက်၊ ပုလင်းများ၊ အရည်ကြည်ထုပ်များ (သို့) ၀ ယ်သူများ၏လိုအပ်ချက်
ပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းများ DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT, ပင်လယ်၊ လေကြောင်းဖြင့်
ပို့ဆောင်ချိန် သင်၏အမိန့်ကိုအတည်ပြုပြီး ၁၅ ရက်မှ ၂၅ ရက်
အောင်လက်မှတ် GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000, QS
ထုတ်ကုန်အများစုတွင် Organic, Halal, Kosher အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရနိုင်သည်
မူလနေရာ ဖူကျန်း၊ တရုတ် (ပြည်မကြီး)
ကုမ္ပဏီအမည် Fuqing King Dnarmsa Spirulina Co. , Ltd.
OEM နှင့် ODM ၏အင်္ဂါရပ်များ:
KING DNARMSA ၏ Private Label အားသာချက်များ
၂။ အာရှထိပ်တန်း R&D စင်တာ
၄။ ကျန်းမာရေးအစားအစာ ၁၀၀ ကျော်ရနိုင်သည်
7. One-to-one အဖွဲ့ ၀ န်ဆောင်မှု
ယခင်: ကုန်ကြမ်း-တိရိစ္ဆာန်အဆင့် Spirulina အမှုန့်တွင် Antioxidant၊ ဓာတ်သတ္တုများ၊ Fatty Acids၊ Fiber နှင့် Protein တို့ပါ ၀ င်မှုမရှိ၊ ဓာတ်မတည့်ခြင်း၊ GMOs မရှိခြင်း
နောက်တစ်ခု: OEM ODM Certified Organic Chlorella Tablets 500mg 1000mg စသည်တို့
OEM ODM လက်မှတ်ရ Organic Spirulina တက်ဘလက်ထုပ်များ
OEM ODM အသိအမှတ်ပြု Organic Chlorella Tablet Caps ...